Reer somalilandow marabtaan inaad wax ka ogaataan cidii ku dhax dishey beertiisa marxuum Xasan Muumin Suldaan, dilkii foosha xumaa ee ka dhacay tuulada WADAJIR.By Ahmed burcaawi
Sunday September 29, 2019 - 21:11:11 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Waxaana kamid ahaa Xildh. Axmad cabdi Kaahin, Xildhibaan Jirde & wasiirka gashaandhiga JSL Cabdiqani Maxamuud Caateeye oo dhamaantood isku reer ah siddaasi darteed dhalinyarada reer Salal markay ogadeen arintaasi waxay balan qadeen ayna ku wacad mareen kuna dhaarteen iney waxaan nimankaa ahayn oo looga aargoynayaa inaanu jirin.
Xildhibaan Axmed cabdi kaahin ilaa goorma ayuu kujirayaa dhuumashada ,& is qarqarsiga? Mase ku badbaadi donaa inuu sidaa kujiro madaama uu yahay dhagar qabe isagu ka danbeeyey dilkii marxuum Xasan Muumin Suldaan oo ahaa marxuumka soo ahaa nin beertiisa qodanaayey oo kana soo jeedey beelweynta bahabarceli.
Xildhibaan Axmad Cabdi Kaahin (Ina Cabdi Casood) , Xil Jirde & wasiirka gaashaandhiga Cabdiqani maxamuud caateeye ayaa la sheegayaa Iney ku sugan yihiin nolol argagax iyo cabsi ah kadib markii lagu eedeeyay ka danbaynta falkii lagu dilay Marxuum Xasan Muumin Suldaan oo beertiisa lagu dhex toogtay, hantidiisiina la gubay 17kii bishan September,taasina waxay keentey iney aad uga cadhodaan dhalinta reer Salal oo uu ka soo jeedo marxuumka la diley.
Ilo ka ag dhaw nimankaasi oo deggan magaalada Hargaysa ayaa sheegaya Iney mudadii u danbeeyay meelo Kala duwan ay seexanayeen kadib markii ay aamini waayeen guryahoogii ay degganayeen ee Hargaysa.
Xog laga helay dadyow xidhiidh la leh sirdoonka Somali land ayaa xaqiijiyay in xalay makhaayad ku taal xaafadda Xera_awr ee magaalada Hargaysa oo Caan ku ah cuntooyinka Wadaniga ah, lagu arkay 7 dhallinyar ah oo loo malaynayo inay reer Salal yihiin oo hadal hayay sida ugu fudud ee loo heli karo nimankaasi aan kor ku xusan oo dhuumaaleysi ku jira inaa iyo intii falkan ay fuliyeen.
Sidoo kale waxa lagu soo warramayaa in xaaladda caafimaad ee nimankaasi ay aad u liidato, kadib markii hordo la'aan ba'ani soo food saartay, iyada oo 7 jeer in kabadan la dhakhtariyay mudadii inna soo dhaaftay.
Wararka ka soo kordhaya Xildhibaan Axmed Cabdi kaahin, Xil Jirde & wasiira gashaandhiga JSL Cabdiqani maxamuud caateeye ayaa waxaa la sheegayaa iney imika cabsi darteed uu fadhiisto guryo kala duwan oo ku yaala xaafada jig-jiga yar,oo ay ku ilaaliyaan ragii dilka ka soo fuliyey magaalada WADAJIR.
Warar la hubo oo lagu ogaadey cidii ka danbeysay dilkii loogu geystey marxuum Xasan muumin Suldaan beertiisa kutaala tuulada WADAJIR waxaana kamid ah Xildhibaan Axmed Cabdi Kaahin,ex wasiir saban & wasiirka Dafaaca JSL Cabdiqani maxamuud caateeye.
Sidda la ogyahay, Xildhibaan Axmad Cabdi Kaahin, Xil Jirde & wasiirka gashaandhiga JSL Cabdiqani maxamuud caateeye ayaa qaarkood Gargariirayeen , shir jaraaid ee qabtay isla maalintii Labaad ee dilku dhacay. Xildhibaan ka oo xakamayn Kari waayay dareenkiisa ayaa hab qirasho loo macnaystay uga faallooday dilkii waxshinnimada lahaa ee ka dhacay deegaanka Wadajir ee Saylac.
Kadib, odayaal u hadlay qoyska marxuumku ka baxay ayaa wacad ku maray inay dili doonaan xildhibaan ka & raga kaleba ay sheegeen Iney igagu ay shiftadii dilka gaysatay soo abaabuleen, waana sababta keentay in xildhibaan ka iyo raga kaleba uu dhulku ku yaraado.
By Ahmed burcaawi